Kudonha Shelter Mushambadzi Anokwidza Warner Bros, Westworld Game Dhizaina | IPhone nhau
Bethesda Softworks yakamhan'arira Warner Bross Inopindirana Varaidzo uye Behaeve Interactive ye kutyora kodzero, ichitaura kuti mutambo weWestworld uyo wanga uripo kwemazuva mashoma paIOS, unoteedzera zvinhu zvakawanda zveFallout Shelter uye inogona kunge iri kodhi yemutambo.
Mumatare akamhan'arwa mudare redunhu reMaryland, Bethesda anoti Westworld shandisa yakafanana dhizaini yemitambo, dhizaini dhizaini, mifananidzo, maficha uye zvimwe zvinhu zvemutambo inozivikanwa kwazvo muKuwira Kwekugara senge kusikwa kwenzvimbo dzepasi pevhu uye aesthetics evatambi vekatuni ve2D mune 3D nharaunda.
Kudonha Shelder yakarova App Store muna 2015 uye hunhu hwechinangwa ndeche kuvaka uye kubata pasi pevhu bunker, kuchengetedza kuisirwa mukushanda kuchichengeta izvo zvinodiwa nevagari, vagari vari kusvika kana kuzvarirwa muzvivakwa.
Westworld yakaburitswa svondo rapfuura uye yakavakirwa pazvirongwa zvepa terevhizheni. KuWestworld isu tinofanirwa kuvaka zvivakwa zvepasi pevhu uye zvekudzivirira epaki yemusoro. Panguva imwecheteyo, isu tinofanirwa kubata ma androids uye nezviitiko zvevaenzi mupaki yemusoro, tichichengeta zvese zvichimhanya zvakanaka, uye kana zvikaratidza, zvigadzirise nekukurumidza sezvazvinogona.
Mhosva yaBethesda inopfuura yekuteedzera kwekushongedza, sezvo ichizvidaro kodhi yakashandiswa muKudonha Kwekugara yakashandiswa zvekare kugadzira Westworld. Behaeve Interactive yakabhadharwa naBethesta kuti ashande paFallout Shelter muna2014, achiteedzera rairo dzaBethesda nguva dzese, saka zvese Maitiro akagadzirirwa mutambo uyu inzvimbo yehungwaru yekare.
"Kuzvibata kwakatyora chibvumirano chayo neBethesda uye ikashandisa mukana wayo kune nzvimbo yehungwaru yeBethesda, kusanganisira kodhi yekopuiti yaBethesda, zvakavanzika zvekutengeserana nedzimwe kodzero," zvinonzi, zvichibvumira maitiro kuderedza nguva yako yekuvandudza, dzikisa mutengo "Uye ipai vatambi zvakafanana" ruzivo rwakakurumbira rwekutamba rwunowanikwa muKuwira Kwekugara. "
Bethesda inoda kuve iyo app inobviswa muApp Store neiyo Play Store uye zvakare inobhadharwa kutyorwa kwekodzero, kusanganisira chero mibairo iyo mutambo wakakwanisa kuburitsa kubva payakarova iyo app inochengetera zvishoma zvishoma pasvondo rapfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Kudonha Shelter mugadziri akamhan'arira Westworld mutambo wekuvandudza Warner Bros